China Smart Mirror na Igwe anwansi LCD gosipụtara maka ime ụlọ ịwụ / ime ụlọ / ime ụlọ LS320M ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Layson
Smart Mirror na Igwe anwansi LCD gosipụtara maka ime ụlọ ịwụ / ime ụlọ / ime ụlọ LS320M
Ngosipụta LCD mbụ
2.Dị ka mma nha anya
3. Mkpebi: 1920 × 1080 ma ọ bụ 3840 × 2160
Usoro 4.OS: Android OS ma obu Windows OS
5.Customized ọrụ: Wuru na-Igwefoto, Wuru na Igwe okwu, Ikanam ìhè, wdg.
Indị ntinye: A na-agbanye mgbidi ma ọ bụ guzoro Ala
Iji mezuo ọchịchọ ndị ahịa anyị na-arịwanye elu, anyị na-enye nnukwu ọkwa dị elu nke anwansi anwansi nke arụpụtara site na iji akụrụngwa akụrụngwa dị elu na teknụzụ dị elu nke na-arụ ọrụ na usoro nrụpụta ọhụụ. Ọ na-enye ohere ịgbanwe foto dị mfe. Ime Anwansi Ime Anwansi dị na nha obosara dị iche iche dịka achọrọ. Anyị na-ahụ na anyị na-enye ndị ahịa anyị akara ngosi a kacha dị ọnụ ahịa n'ọtụtụ ọnụahịa. Ọzọkwa, anyị na-eburu ihe a na ngwugwu nkwakọ ngwaahịa kachasị mma iji hụ na nnyefe dị nchebe n'oge njem.
Kinddị Smart Mirror a na-eji iko enyo pụrụ iche dị ka panel panel, nke enwere ike iji ọ bụghị naanị ile anya na enyo ahụ, kamakwa iji hụ ihuenyo mgbasa ozi gosipụtara site na enyo ahụ. Ọ na - eweputa usoro magnetron nke na - arụ ọrụ, nke a na - edozi site na ntụgharị uche na iko iko. A smart mirror bụ naanị nke ahụ - a smart mirror. Dị ka ekwentị gị, enyo ndị a na-ejikọ Wi-Fi, nwere igwe foto dị n'ime ya, ma na-agbanye olu. Ha na-enye ọhụụ ọhụrụ na mmekọrịta mmekọrịta. Ọ na-abịa na ndụ ogologo oge, teknụzụ dị elu, nrụnye dị mfe, nrụpụta siri ike yana ụgwọ mmezi dị ala. Okwesiri maka villas, klọb nkeonwe, ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ okporo ígwè dị elu, ebe mgbakọ, ebe ngosi ihe mgbe ochie, ebe ịzụ ahịa, ebe ihe nkiri sịnịma, họtel kpakpando, wdg.
Ala Dị Anwansi Anwansi
Enweghị aka / Capacitive aka
Nwa na ọla ọcha
Sistemụ arụmọrụ: Android 5.1 / 6.0 / 7.1
HDD: 500 / 1TB Sistemụ arụmọrụ: merie 7 / mmeri 10
Nke gara aga: Smart Mirror na ihuenyo mmetụ, Anwansi Anwansi Igwe LCD Ngosipụta maka Blọ ịsa ahụ / Bath / Makeup / Fitness / Gym / Hotel / Smart Home
Osote: Akpaka aka sanitizer dispenser kiosk na 21.5 inch LCD Advertising Display Digital signage LS215A
Interactive Smart ihuenyo mmetụ tebụl maka kọfị ...
Copyright - 2010-2021: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa, Sitemap, Wall Mounted Digital Signage, Digital Signage Standee, Mgbasa Ozi Digital, Ngosipụta nke Digital, Interactive Touch Screen Kiosk, Standalone Digital Akara, Ngwaahịa niile